Madaxweyne Yuusuf oo dayruurad Ugaandha leedahay looga qaaday Muqdisho, 38 askari oo reer Puntland oo goor dhow lagu dilay agagaarka Hotel Ramadaan iyo Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Puntland oo looga xoog raanaaday dagaal dhawaan ka dhacay Suuqa Xoolaha. iyo Gacmadhere iyo Cadde Gaabo oo la filayo in ay is casilaan kadib markii lagu ihaaneystay albaabka madaxtooyada 21/03/07
Warar aan dhawaan ka helnay magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in dayuurad ay leedahay dowladda Yugaanda ay ka qaaday madaxweynaha dowladda federaaka ah ee Soomaaliya.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in madaxweye Yuusuf la geeyay magaalada Baydhabo kadib markii ay soo bexeen warar sheegaya in dagaal culus ku soo fool leeyahay madaxtooyada oo ay ku sugnaayeen saddexda mas'uul ee ugu sareysa dowladda federaalka ah ee Soomaliya.
Sidoo kale, warar kale ayaa sheegaya in agagaarka Hotel Ramadaan lagu dilay 38 askari oo reer Puntland ah kadib marki weerar gaadmo ah lagu qaaday ayagoo halkaasi marayay si ay uga qeyb galaan dagaal ka socoday agagaarka suuqa xoolaha oo dhex marayay maleeshiyaad hubeysan iyo ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan kuwa dowladda oo u badan reer Puntland.
Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar isa soo tagaya oo sheegaya in laga yaabo in ay dhawaan is casilaan wasiirka arrimaha gudaha iyo duqa magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kagadaal markii Xildhibaan M M Gacmadhere iyo mudane Cadde Gaabow loo diiday in ay galaan madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in sarkaal ay qaraabo yihiin madaxweynaha Soomaliya uu u sheegay mas'uuliyiintan shalay mar ay isku dayeen in ay ka qeyb galaan shir ka soconayay madaxtooyada in ay iska laabtaan maadaama uu madaxweynaha la shirayo mas'uuliyiin kale.
Mas'uuliyiinta uu madaxweynaha la shirayay ayaa la sheegay in ay ahaayeen ra'isul wasaare Geeddi iyo Guddomiyaha baarlamaanka Sheekh Adan Madoobe oo ah dhawaan xildhibaannada ku sugan u doorteen guddoomiye.
Warar laysa dhex marayaa ayaa sheegaya in sarkaalka ka celiyay mas'uuliyiintan uu si xun ula hadlay markii ay ka codsadeen in ay galaan Villa Soomaaliya.
Cabdullahi Xuseen, Ruukinet, London